Yaadannoo Waggaa 25 ffaa Ajjeechaa Gooticha Artistii Jaallatamaa EEBBISAA ADDUNYAA – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooYaadannoo Waggaa 25 ffaa Ajjeechaa Gooticha Artistii Jaallatamaa EEBBISAA ADDUNYAA
Ganama subii ture EEBBISAA ADDUNYAA fi XANNAA WAYYEESSAA bakka tokkotti, kaayyoo tokkichaan diinaan kan galaafataman. Kunoo guyyaan guyyaa dhalchitee har’a 25ffaa isaa yommuu kabajannu, ilmaan Oromoo, Oromoof loluu irraa kaasee hanga wareegamaatti, akkasumas haqa uummata isaanii gad baasuudhaan sagalee waan ta’an qofaaf kan ajjeechaan suukanneessaa sirna Itoophiyaan( autocracy) ajjeefaman fi kan achi buuteen isaanii dhabame hedduu walumaan yaadachuu fi seenaa isaanii ol kaasuun barbaachisaa dha.
Hagayya 30/1996 guyyaa EEBBISAA ADDUNYAA fi XANNAA WAYYEESSAA bakka tokkotti ajjeefaman yogguu tahu, kanuma sababeeffachuun Qabsaawota, Artistootaa fi Barreessitoota qaqqaalii Oromoo mara dantaa siyaasaa fi taayitaa yeroof jecha sirni dhufee darbaan Garboomfattootaa ajjeesaa fi dhabamsiisaa ture keessaa duraa duubaan yogguu yaadannu kanneen akka:
1. Abdullaahi Arsii,
2. Ayuub Abubakar,
3. Abubakar Muusaa,
4. Musxafaa Abdii (Harawwee),
5. Ahmed Kebiraa,
6. Ayyaantuu Booranaa,
7. Himee Yusuuf,
8. Kulanii Boruu,
9. Sabboontuu Bareentuu,
10. Boonsisoo Callaa,
11. Hordofaa Bareentoo,
12. Jireenyaa Ayyaanaa,
13. Eebbisaa Adduunyaa, (Hagayya 30/1996)
14. Xannaa Wayyeessaa, ( Hagayya 30/1996)
15. Usmaayyoo Muusaa, (sad 18/2006)
16. Abdii Qophee,
17. Baahiluu Girmaa,
18. Zennuu Mokonnon,
19. Yoosef Gammachuu,
20. Maaramee Harqaa-Kaasaa,
21. Daadhii Galaan,
22. Cawwaaqa Yaaddessaa
23. Hacaaluu Hundeessaa fi kannneen biroo waan quuqqaa uummata isaanii irra jiru saaxilaniif qofa ajjeefamanii gariinis achi buuteen dhabamsiifaman kan itti yaadannudha.
Dirree lolaa irraa kaasanii hanga aartii sirbaatii fi barruu garagaraan: aadaa, afaan, eenyummaa, seenaa fi duudhaa Oromoo dagaagsuu keessatti gahee leencaa bahataa waan turaniif qofa warreen garee Itoophiyaatti of moggaasuun Oromiyaaf Oromoo dhabama gochuuf dhama’aniin kanneen of biraa dhabnedha.
Ajjeechaa kana qofaa osoo hin taane, hanga ammaallee Artistoonni hedduun murna aangoorra jiruun ari’atamuun, hidhamuun har’as mana hidhaa garagaraa fi mooraa waraanaa fagoof dhihoo jiran keessatti darbatamuun dararamaa jiru.
Kanneen achi buuteen isaanii dhabamuun ammallee maatiin quba hin qabaannellee hedduutu jiru.
Gochaaleen akkasii farra dimokraasii qofaan ibsinee kan darbinu osoo hin taane, sarbama mirga namummaa kan uumaan ganamuma nuuf kennedha.
Yaada ofii ibsachuu irraa fageeffamuuf yaalamuun ammoo tuffii sabichaaf qaban tahuyyuu sarbinsa diimokiraasiidha waan tahaniif cimsinee balaaleffanna.
Qeerroon Bilisummaa Oromoo fi warri Oromiyaaf gatii kanfalaa jiran gadda kana bara baraan yaadachaa warra oromoo ajjeesuu fi dhabamsiisuuf dhaadeffate sirna garboomfataa of irraa kaasuuf kan carraaqnu tahuu gamanumaan ibsuu feena.
Xumura irratti, Sabboontotni, Qabsaa’onni, Gootonni, Hayyootni, fi Hoggansi Qabsoo Oromoo yakka malee mana hidhaatti dararaa hamaa argan hatattamaan akka nuuf lakkifaman qaama dhimmi ilaaluuf ykn sirna ukkaamsee bareef kan dhaamnu tahee, yoo kan hin lakkisne tahan garuu, ofii Hidhamtoota keenya akkaataa barbaannuun kan lakkisiifannu tahuus gahumsaaf humna oromoon qaburraa kaanee ibsuu feena.
Gumaa Gootaa Gootatu baasa!
Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi Hawaasa bal’aa jaallattoota oromoof oromummaa irraa!
FINFINNEE, OROMIYAA, AFRIKAA, ADDUNYAA!
Remembering the Timeless and the Legend Misician Eebbisaa Addunyaa, will live through generations and generations!!
~Hiibboo Kallachaa Qabsoo ummata Oromoo ABO
~Siifaan lola Oromoo narra hin gortu
~Nan didiin dubbii kiyya… eessa jirta Faaxee kiyya
~Arraban nu sobaa afaan qawween ayii lamuu nu garboomsaan
~Namni seenaa hin beekne bishaan gabateerrati gara argetti jaallata
~Tokkummaa jabeessa kana qorichisa
~Bacaqii boorafatee…ka’ee Shigiree bitee ofirra…”
Sadaasa 26, 2019 Konyaa ABO, Washington, DC
Mootummaan Yunaayitid Isteets Gabaaasaa Waggaa Ka Mirga Dhala-namaa Biyyoota Addunyaa Ifa Godhe Jaallannee Gammadaa, Ebla…
Maal Mallisaa: Taateewwan hin dagatamne jaha Haacaaluu Hundeessaa ittiin yaadatamu (BBC Afaan Oromoo) -- Artiist…
Proud of you Qeerroo for keeping the memories of our artists and sages who perished in the hands of the Amhara Nefxagna State alive! I would hasten to add Dabbassaa Guyyoo to that list!